Omenala PB2000V-PB6000V agụụ ụdị ngọngọ ịkpụzi igwe Manufacturer na Supplier | Dongshen
EPS agụụ agụụ Nkedo Machine bụ oru oma EPS igwe na-eme EPS nkanka. Enwere ike belata osisi EPS na mpempe akwụkwọ maka mkpuchi ụlọ ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa. Ngwaahịa ndị a ma ama nke ejiri EPS rụọ bụ ogwe ntụwichi EPS, ogwe 3D, ogwe mkpuchi mgbidi dị n'ime na mpụga, ngwugwu iko, ngwongwo ngwongwo wdg.
EPS agụụ ngọngọ ịkpụzi igwe nwere ike na-emepụta elu njupụta EPS nkanka, na-arụ ọrụ na ngwa ngwa okirikiri, na ihe nile nkanka na-ogologo na ike na na mmiri mmiri mmiri. Igwe ahụ nwekwara ike ịme obere njupụta dị mma. Ọ nwere ike ime nnukwu njupụta na 40g / l na obere njupụta na 4g / l.
EPS agụụ Block Nkedo Machine zuru ezu na isi igwe ahụ, akara igbe, agụụ usoro, na-erikpu usoro wdg
EPS Block Nkedo Machine uru
1.Minii na-eme ka tubes dị ike dị elu na nnukwu efere ígwè;
2.Machine na-eji 5mm gbara ọkpụrụkpụ ụgbọ mmiri steam na mkpuchi Teflon. Na n'okpuru aluminum efere, ibu sized akwado na ihe nke ukwu na-etinye iji zere aluminum efere deform n'okpuru elu nsogbu. Epeepe Aluminom agbanweghi mgbe afọ iri gachara;
3.Machine niile isii ogwe bụ site na ọgwụgwọ ọgwụgwọ iji hapụ nrụgide ịgbado ọkụ, nke mere na ogwe enweghị ike nrụrụ n'okpuru oke okpomọkụ;
4.Minwe nwere uzuoku ozo iji jide uzuoku obula na ngọngọ, ya mere ngọngọ ngọngọ ka mma;
5.Minye efere na-na mma drainage usoro otú nkanka na-ọzọ Fikiere na ike bee na obere oge;
6.All igwe efere site nchara wepụ, bọl spraying, mgbe ahụ na-eme mgbochi nchara isi sere na n'elu sere, otú igwe ahu adịghị mfe inwe ajari;
7.Machine na-eji usoro piping smart na usoro steaming, na-eme ka njikọta nke ọma nke mgbochi ma maka nnukwu njupụta na obere njupụta;
8.Fast ndochi usoro na oru oma agụụ usoro ana achi achi igwe ngwa ngwa na-arụ ọrụ, ọ bụla ngọngọ 4 ~ 8 nkeji;
9.Ejection na-achịkwa hydraulic pump, yabụ ndị na-achụpụ ihe niile na-asọ ma laghachi n'otu ọsọ;
10.Matakara akụrụngwa eji rụọ ọrụ na igwe dị ma ọ bụ ngwaahịa ama ama ama.
Akpụzi uji eze Size
2 `` (DN50)
6 `` (DN150)
Kg / okirikiri
1.5 `` (DN40)
m³ / okirikiri
Agụụ Cooling Water
4 `` (DN100)
5 `` (DN125)
Ala Steam Anwụrụ
Air Jụrụ ekupụ
Ike 15kg / m³
Min / okirikiri
Jikọọ Ibu Ibu / Ike
Nke gara aga: PB2000A-PB6000A Ikuku jụrụ ụdị ngọngọ ịkpụzi igwe
Osote: SPY90-SPY120 Na-aga n'ihu Pre expander